IArc Hub, ihabhu enamazibuko asi-7 ofuna ukuba nawo kwi-MacBook yakho | Ndisuka mac
IArc Hub, ihabhu enamazibuko ayi-7 ofuna ukuba nawo kwi-MacBook yakho
URuben inyongo | | Izixhobo
Abasebenzisi abaninzi bakhalaza malunga nonxibelelwano oluncinci olunikezelwa ziilaptops zamva nje zeApple. Sithetha ngeMacBook Pro kwaye, ngaphezulu kwako konke, eyona incinci yosapho, i-12-intshi iMacBook. Esinye sezisombululo ezinikezelwa nguApple kukufumana inani elingenasiphelo seadaptha oza kuthi uqhagamshele kwizibuko le-USB-C leekhompyuter zakho ukuze udibanise zonke iintlobo zezinto zangaphandle.
Nangona kunjalo, isisombululo esifanelekileyo kukuba "nehabhu" okanye isinxibelelanisi esinika inani elikhulu lonxibelelwano kwaye izixhobo ezahlukeneyo zinokudityaniswa ngaxeshanye. Kwaye yile nto ayenzayo IArc Hub, ingqokelela entle emise okweqanda eqokelela ukuya kuthi ga kwi7 zonxibelelwano ezahlukeneyo. Egqibelele? Kuya kuhlala kuphela i-USB-C port enye kwi-MacBook yakho okanye kwi-MacBook Pro.
I-Arc Hub yinto yokuncedisa eya kukuvumela ukuba ungeze ukudibanisa kwi-MacBook yakho njengomdla njengoko amazibuko amabini e-USB-C. Enye yazo iya kusetyenziswa ukunxibelelana nelaptop ngelixa enye iya kusinceda ukutshaja ibhetri yezixhobo. Siya kuba nayo I-2 izibuko ze-USB 3.0 ukuze ukwazi ukudibanisa iipheripherali okanye izinto zokugcina zangaphandle. Ukufunda nokubhala isantya ukuya kuthi ga kwi-640 mbps / 5 gbps- esi santya siza kuncitshiswa kwaye zombini izibuko ziyasetyenziswa.
Kwelinye icala, iArc Hub ikwabonelela ngezisombululo ukuze ukwazi ukudibanisa iMacBook yakho kwiscreen esingaphandle. Kule meko siza kuba ne-Mini Display Port eza kuthi ixhase ezi zisombululo zilandelayo: 1080p kwi-60 Hz, 2.560 x 1.440 kwi-60 Hz okanye kwi-3.840 x 2.160 nge-30 Hz. IArc Hub ikwabonelela ngemveliso ye-HDMI v.1.4, kunye nomfundi wekhadi le-SD onokuzikhuphela ngayo zonke iifoto ozithatha ngekhamera yakho yedijithali.
Ukuba unomdla wokuyithenga, kuya kufuneka uyazi ukuba le Arc Hub, emva kokwamkelwa kakuhle eqongeni crowdfunding Indiegogo, Sele ithengisiwe ukusukela ngoJulayi ophelileyo. Ixabiso layo li- $ 134,99. Okanye iyafana: malunga ne-114 euros kutshintsho lwangoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » IArc Hub, ihabhu enamazibuko ayi-7 ofuna ukuba nawo kwi-MacBook yakho
UTim Cook uthetha nabafundi kwiYunivesithi yaseOxford
Iinkcukacha ezithe kratya zePixelmator Pro ngaphambi kokumiliselwa kule vidiyo